Unmanned Kushambadzira Drones | Martech Zone
Muvhuro, July 10, 2006 China, May 4, 2017 Douglas Karr
NeChishanu chapfuura, ndakaita nharo huru neshamwari yangu, Bill Hammer. Chinzvimbo chake chaive chekuti kuva nebhajeti hombe remauto hakuna chaakaita kunze kwekuviga hupfumi. Ndakaverenga kuti mauto, munzira dzakawanda, akaenzana nehurumende yekudyara mari mukuvandudza matekinoroji matsva uye kugadzirwa kwemazhinji. Ini ndaizowedzera kuti, mubhizinesi re 'kuuraya kana kuurawa', matanda haana kukwirira kana zvasvika pakuda kwehunhu uye negoho.
(Ndokumbirawo usandinyorere 'hondo mongerer' kutyisidzira nerufu neiyi posvo kwete kutaura kuti mutengo wehunyanzvi uye kugadzirwa kwemazhinji kwakakodzera kudurura ropa pamusoro.)
Nezvose zvataurwa, tarisa chinyorwa chaGizmodo pa unmanned kushambadzira drones. Kufuridzira uye otomatiki! Ehezve, ini handina chokwadi chekuti uku ndiko kukunda kwevatengi. Chinhu chekupedzisira chandinoda kubhururuka nekuburitsa yangu bluetooth PDA ichindiudza kuti deodorant iri kutengeswa inotevera block pamusoro.
Zvichida Bill aive nepfungwa…
Tags: drone the manodronesphantom